ओलीले फेरी अर्को मूर्खतापूर्ण कदम चाल्न सक्ने ! – Dainik Samchar
ओलीले फेरी अर्को मूर्खतापूर्ण कदम चाल्न सक्ने !
February 24, 2021 208
नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) नेपाल–प्रचण्ड समूहका अध्यक्षद्वय पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ र माधवकुमार नेपालले प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना गराउने सर्वाेच्च अदालतको आजको फैसला ऐतिहासिक भएको बताउनुभएको छ । फैसलापछि आज सञ्चारकर्मीलाई प्रतिक्रिया दिँदै उहाँहरुले फैसला सकारात्मक आएकाले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नैतिकताको आधारमा राजीनामा दिनुपर्ने बताउनुभयो ।
अध्यक्ष दाहालले सर्वोच्चले जनताको पक्षमा फैसला गरेको भन्दै यो जनताको जित भएको बताउनुभयो । उहाँले भुलभुलैवामा लागेका पार्टीका नेता कार्यकर्तालाई फर्किन समेत आग्रह गर्नुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “ओलीसँग गएका सांसदलाई हाम्रो नेतृत्वको नेकपामा स्वागत गर्न म तयार छु ।” उहाँले अगाडि भन्नुभयो, “अब सबै भ्रममुक्त हुनुस्, सबै काममा फर्किनुस् ।”
उहाँले अब हुने विरोध जुलुसलाई विजय जुलुसमा परिवर्तन गरेर मनाउन सबै नेता, कार्यकर्ता आग्रहसमेत गर्नुभयो । अध्यक्ष नेपालले अदालतले प्रतिनिधिसभाको पुनःस्थापना गर्ने फैसला गरेर आफ्नो गरिमालाई बढाएको प्रतिक्रिया दिनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “अदालतले प्रधानमन्त्रीको कदमलाई बदर गर्ने निर्णय गरेर अत्यन्तै प्रशंसनीय र ऐतिहासिक फैसला गरेको छ ।”
‘प्रचण्ड’ ले ओलीलाई अर्को मुर्खतापूर्ण कदम नचाल्न पनि चेतावनी दिनुभएको छ । सर्वोच्च अदालतले ओली गलत भन्ने प्रमाणीत गरिसकेकाले तत्काल राजिनामा दिनुपर्ने उँहाको माग छ । प्रधानमन्त्री ओलीले चालेको कदमले जनताले दुख पाएको बताउँदै अब तत्काल राजिनामा दिनुपर्ने सुझाव दिनु भएको छ । अब अलिकति पनि लाज छ भने, नैतिकता छ भने राजीनामा दिनुहोस्,’ प्रचण्डले एक अनलाईनसंग कुराकानीका क्रममा भन्नुभयो, ‘अर्को मूर्खता गर्नु भयो भने राजा–महाराजाको भन्दा ठूलो दुर्गती हुनेछ । यो मेरो सुझाव हो ।’
प्रधानन्यायाधीशलगायत सबै न्यायाधीशको पनि इज्जत र प्रतिष्ठा बढाएको बताउँदै नेता नेपालले आम नेपाली जनताको चाहनाबमोजिम संविधानको प्रावधान, मूल्य र मान्यता, त्यसको व्याख्यालाई न्यायाधीशहरुले सही ढङ्गले अगाडि सार्ने काम गरेकोे बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “यो अत्यन्तै प्रशंसनीय काम भएको छ । सम्पूर्ण नेपाली जनता, राजनीतिक दलहरु जो आन्दोलनमा उत्रिनुभएको थियो, नागरिक समाज, मिडिया, समाजका सबै वर्ग तहका जनतालाई धन्यवाद दिन चाहन्छु ।”
अध्यक्ष नेपालले अब प्रधानमन्त्री ओलीको विरोधमा रहेका दलहरुको संयुक्त सरकार बनाएर अगाडि बढ्ने बताउनुभयो ।
यसैबीच अध्यक्षद्वयले एकार्कालाई लड्डु खुवाएर खुशी साटासाट गर्नुभएको थियो । फैसलापछि जिल्लाका विभिन्न ठाउँमा दीप प्रज्ज्वलन गरिएको छ । अध्यक्षद्वय बुधबार हुने कार्यक्रममा सहभागी हुन आज यहाँ आउनुभएको हो ।
Prevएउटा कुकुर र चितुवा एउटै ट्वाइलेटभित्र ७ घण्टासम्म थुनिएपछि…
Nextपाथिभरा माताले सबैको मनोकामना पुरा गरुन, फाल्गुन १६ गते आईतबार, आज तपाईको भाग्य कस्तो छ हेर्नुहोस राशिफल
पल शाहले भने- त्यो रात म कमल खत्रीसँग सुते
प्रथम दोरम्बा राष्ट्रपति रनिङ शिल्ड : ९ स्वर्णसहित काकलिङ मावि प्रथम
साँघुरो डेरादेखि आफ्नै आलिसान घरसम्मको यात्रा, यस्तो छ अभिनेत्री सरिता लामिछानेको घर संघर्ष